Jenesis 46 Baịbụl Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Dị n'Ịntanet
46 Izrel na ndị niile bụ́ nke ya wee kwalie bịarute Bia-shiba,+ o wee chụọrọ Chineke nna ya Aịzik+ àjà. 2 Chineke wee gwa Izrel okwu n’ọhụụ abalị wee sị:+ “Jekọb, Jekọb!” o wee sị: “Lee m!”+ 3 O wee gaa n’ihu ịsị: “Abụ m ezi Chineke,+ Chineke nke nna gị.+ Atụla egwu ịgbada Ijipt, n’ihi na m ga-eme ka ị ghọọ mba dị ukwuu n’ebe ahụ.+ 4 Mụ onwe m ga-eso gị gbadaa Ijipt, mụ onwe m aghaghị ịkpọpụtakwa gị;+ Josef ga-eji aka ya mechie anya gị.”+ 5 E mesịa, Jekọb biliri si na Bia-shiba pụọ, ụmụ Izrel wee gaa n’ihu iburu Jekọb nna ha na ụmụntakịrị ha na ndị nwunye ha n’ụgbọala ndị ahụ Fero zigara ka e were bute ya.+ 6 Ha chịkwaara ìgwè anụ ụlọ ha, burukwa ngwongwo ha, ndị ha nwetara n’ala Kenan.+ N’ikpeazụ, ha batara n’Ijipt, Jekọb na ụmụ ya niile. 7 Ọ kpọọrọ ụmụ ya ndị ikom na ụmụ ụmụ ya ndị ikom, ụmụ ya ndị inyom na ụmụ ụmụ ya ndị inyom, ọbụna ụmụ ya niile, bata n’Ijipt.+ 8 Ndị a bụ aha ụmụ ndị ikom Izrel, ya bụ, ụmụ ndị ikom Jekọb, ndị batara n’Ijipt:+ ọkpara Jekọb bụ Ruben.+ 9 Ụmụ ndị ikom Ruben bụ Henọk na Palu na Hezrọn na Kamaị.+ 10 Ụmụ ndị ikom Simiọn+ bụ Jemuel na Jemin na Ohad na Jekin+ na Zoha na Sheọl+ bụ́ onye nwaanyị Kenan mụrụ. 11 Ụmụ ndị ikom Livaị+ bụ Geshọn,+ Kohat+ na Meraraị.+ 12 Ụmụ ndị ikom Juda+ bụ Ea+ na Onan+ na Shila+ na Pirez+ na Zira.+ Otú ọ dị, Ea na Onan nwụrụ n’ala Kenan.+ Ụmụ ndị ikom Pirez wee bụrụ Hezrọn+ na Hemọl.+ 13 Ụmụ ndị ikom Ịsaka+ bụ Tola+ na Puva+ na Yọb na Shimrọn.+ 14 Ụmụ ndị ikom Zebulọn+ bụ Sired na Ilọn na Jaliel.+ 15 Ndị a bụ ụmụ ndị ikom Lia,+ ndị ọ mụụrụ Jekọb n’ime Padan-eram, tinyere nwa ya nwaanyị bụ́ Daịna.+ Mkpụrụ obi niile bụ́ ụmụ ya ndị ikom na ụmụ ya ndị inyom dị iri atọ na atọ. 16 Ụmụ ndị ikom Gad+ bụ Zifiọn na Hagaị, Shunaị na Ezbọn, Iraị na Arodaị na Arilaị.+ 17 Ụmụ ndị ikom Asha+ bụ Imna na Ishva na Ishvaị na Beraya,+ Sira bụkwa nwanne ha nwaanyị. Ụmụ ndị ikom Beraya bụ Hiba na Malkiel.+ 18 Ndị a bụ ụmụ ndị ikom Zilpa,+ onye Leban kpọnyere ada ya bụ́ Lia. Ka oge na-aga, ọ mụụrụ Jekọb ndị a: mkpụrụ obi iri na isii. 19 Ụmụ Rechel,+ nwunye Jekọb, bụ Josef+ na Benjamin.+ 20 E wee mụọrọ Josef Manase+ na Ifrem+ n’ala Ijipt, bụ́ ndị Asinat+ ada Pọtifera bụ́ onye nchụàjà Ọn mụụrụ ya. 21 Ụmụ ndị ikom Benjamin bụ Bila+ na Bika+ na Ashbel, Gira+ na Neaman,+ Ihaị na Rọsh, Mọpim+ na Họpim+ na Ad. 22 Ndị a bụ ụmụ ndị ikom Rechel bụ́ ndị a mụụrụ Jekọb. Ha niile dị mkpụrụ obi iri na anọ. 23 Ụmụ ndị ikom Dan+ bụ Hushim.+ 24 Ụmụ ndị ikom Naftalaị+ bụ Jaziel na Gunaị+ na Jiza na Shilem.+ 25 Ndị a bụ ụmụ ndị ikom Bilha,+ onye Leban kpọnyere nwa ya nwaanyị bụ́ Rechel. Ka oge na-aga, ọ mụụrụ Jekọb ndị a; ha niile dị mkpụrụ obi asaa. 26 Mkpụrụ obi niile ha na Jekọb so bata n’Ijipt si n’úkwù ya pụta,+ ma e wezụga ndị nwunye ụmụ Jekọb. Ha niile dị mkpụrụ obi iri isii na isii. 27 Ụmụ ndị ikom Josef ndị a mụụrụ ya n’Ijipt dị mkpụrụ obi abụọ. Mkpụrụ obi niile nke ụlọ Jekọb bụ́ ndị batara n’Ijipt dị iri asaa.+ 28 O wee zipụ Juda+ ka o buru ya ụzọ gakwuru Josef ka o zie ya ozi banyere Goshen tupu ya erute. E mesịa, ha batara n’ala Goshen.+ 29 Josef wee mee ka a kwadebe ụgbọ ịnyịnya ya, o wee gaa na Goshen+ izute Izrel nna ya. Mgbe o rutere n’ihu ya, ọ dakwasịrị ya n’olu ozugbo wee bee ákwá ugboro ugboro ka ọ dakwasịrị ya n’olu.+ 30 N’ikpeazụ, Izrel sịrị Josef: “Adị m njikere ịnwụ ugbu a,+ ugbu a m hụworo ihu gị, ebe ọ bụ na ị ka nọ ndụ.” 31 Josef wee gwa ụmụnne ya na ezinụlọ nna ya, sị: “Ka m gaa kọọrọ Fero wee sị ya,+ ‘Ụmụnne m na ezinụlọ nna m bụ́ ndị nọ n’ala Kenan abịakwutewo m n’ebe a.+ 32 Ha bụ ndị na-azụ atụrụ,+ n’ihi na ha bụ ndị na-akpa anụ;+ ha chị ìgwè ewu na atụrụ ha na ìgwè ehi ha bịa n’ebe a, ha butekwara ihe niile ha nwere.’+ 33 Ọ ga-erukwa na mgbe Fero kpọrọ unu wee sị, ‘Gịnị bụ aka ọrụ unu?’ 34 Unu ga-asị, ‘Ndị ohu gị anọwo na-akpa anụ malite n’oge anyị bụ ụmụaka ruo ugbu a, ma anyị onwe anyị ma nna nna anyị hà,’+ ka unu wee biri n’ala Goshen,+ n’ihi na onye ọ bụla na-azụ atụrụ bụụrụ Ijipt ihe arụ.+